iDevice များ Battery စားသက်သာစေရန် လုပ်ဆောင်သင့်သော 15 ချက် - .::just for share::.
Home » IOS » iDevice များ Battery စားသက်သာစေရန် လုပ်ဆောင်သင့်သော 15 ချက်
iDevice များ Battery စားသက်သာစေရန် လုပ်ဆောင်သင့်သော 15 ချက်
1. Close Background App
- App တစ်ခုခုကို အသုံးပြုပြီးတိုင်း ချက်ချင်းဖြစ်ဖြစ် ပြန်မသုံးသေးဘူးဆိုရင် အဲ့ဒီ App ကို Complete Close လုပ်ပေးပါ။
2. Proper Charging
- သင့်ရဲ့ iDevice ကိုတစ်လမှာ တစ်ကြိမ်လောက်ဖြစ်ဖြစ် Battery 20% အောက်ရောက်အောင် အသုံးပြုပြီးနောက် Full Charge ကို Non-Stop ပြန်သွင်းပါ။အားသွင်းနေတုန်းမှာ တခြားဘာမှမလုပ်ဆောင်သင့်ပါ။
ထို့ ပြင် နေ့ စဉ် ပုံမှန် အားတစ်ကြိမ်တော့ သွင်းပေးပါ။
- အပူဟာ Battery တွေအတွက် အရေးကြီးဆုံး သတိထားရမဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။သင့်ရဲ့ iDevice ကို နေရောင်နဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ နေမဲ့နေရာမျိုးတွေဖြစ်စေ ၊ တခြားသော အပူချိန်မြင့်မားသောနေရာမျိုးတွေမှာဖြစ်စေ ထားရှိခြင်းကို ရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်။
- သင့်ရဲ့ iDevice ကို Wifi အသုံးပြုနေချိန်မှလွဲ၍ ကျန်သောအချိန်တွေမှာ Wifi မသုံးတော့ဘူးဆိုရင် Off လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။
- သင့်ရဲ့ iDevice ကို Bluetooth အသုံးပြုနေချိန်မှလွဲ၍ ကျန်သောအချိန်တွေမှာ Bluetooth မသုံးတော့ဘူးဆိုရင် Off လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။
- သင့်ရဲ့ iDevice ကို AirDrop အသုံးပြုနေချိန်မှလွဲ၍ ကျန်သောအချိန်တွေမှာ AirDrop မသုံးတော့ဘူးဆိုရင် Off လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။
7. Lock Your iDevice
- Auto-Lock Feature ကိုအချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးထားခြင်းကြောင့် သတိမေ့လို့ ပဲဖြစ်ဖြစ် အခြားအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် Lock မဖြစ်ပဲ Device ပွင့်နေခြင်းကြောင့် Battery ကုန်ခြင်းကို ကာကွယ်ထားနိုင်ပါတယ်။
8. Upgrade Your Software
- သင့်ရဲ့ iDevice တွေကို Apple မှထုတ်လုပ်ပေးထားသော နောက်ဆုံး iOS Version တွေကို Upgrade အမြဲတမ်းလုပ်သင့်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Apple မှသူတို့ရဲ့ iDevice တွေရဲ့အားနည်းချက် ချို့ယွင်းချက်တွေကို အစဉ်အမြဲရှာဖွေပြီး ပြုပြင်ပေးနေမှူကြောင့် Battery Performance တွေကိုပါ ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။
9. Don’t Use Third Party Charger
- ဒီအချက်က အတော်အရေးကြီးပါတယ်။Apple ရဲ့ iDevice တွေကို Apple iDevice ဝယ်ကတည်းကပါလာတဲ့ Battery Charger နဲ့ပဲအားသွင်းပါ။အခြားသော ပြင်ပ Company ကထုတ်လုပ်တဲ့ Battery Charger တွေနဲ့ အားမသွင်းသင့်ပါဘူး။အခန့် မသင့်ရင် ပေါက်ကွဲပြီး အသက်ပါဆုံးရှူံးနိုင်ပါတယ်။
10. Use Static Wallpaper
- Dynamic Background ပုံလေးတွေက လှပပေမဲ့ Battery ကိုတော့ ပိုစားပါတယ်။ ဒါကြောင့် Battery ပိုကြာရှည်ခံစေချင်ရင် လှူပ်ရှားမှူမရှိတဲ့ Static Background Image လေးတွေကိုသာသုံးသင့်ပါတယ်။
- Automatic Downloads လုပ်ဆောင်ချက်ဟာ မိမိရဲ့ iDevice ထဲမှာ ရှိတဲ့ App တွေကို Update အသစ်ထွက်တိုင်း နောက်ကွယ်ကနေ Auto Update လုပ်ဆောင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့် ဒီ Feature ကိုပိတ်ထားခြင်းအားဖြင့် Battery စားနှူန်းကို လျော့ချနိုင်ပါတယ်။
13. Adjust Auto Brightness
- Auto-Brightness ကို On ပေးထားခြင်းကြောင့် မိမိရဲ့ iDevice တွေမှာ Battery စားနှူန်းကို လျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။
- အချို့ App တွေက သင့်ရဲ့လက်ရှိတည်နေရာကို အသုံးပြုကြပါတယ်။အချိန်တိုင်းလိုလို သင့်ရဲ့ လက်ရှိတည်နေရာကို ထောက်လှမ်းနေမယ်ဆိုရင် Battery အကုန်မြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့် မလိုအပ်ဘူးဆိုရင် Location Service ကိုပိတ်ထားသင့်ပါတယ်။
- ကိုယ့်ရဲ့ iDevice တွေမှာ မလိုအပ်ပဲနဲ့ Mobile Data On ထားခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။ 3G/4G တွေဟာလိုင်းဆွဲအားမြန်တယ်ဆိုပေမဲ့ Battery ကိုလည်းပိုစားပါတယ်။ဒါကြောင့် မလိုအပ်ဘူးဆိုရင် Off လုပ်ပေးထားသင့်ပါတယ်။